I-PA007 - I-ALG Emergency Shrill Alarm Yokudlwengulwa, iJogger, Abesifazane, Izingane, Abadala - $ 45 - Izixazululo ze-OMG
I-PA007 - I-ALG Emergency Shrill Alarm Yokudlwengulwa, iJogger, Abesifazane, Izingane, Abadala - $ 45
UKUHLELA KANYE: Uma kwenzeka okuphuthumayo, phonsa iphini yensimbi, i-alamu Yomuntu siqu izokhipha masinyane umsindo wexwayiso we-120 decibels ukuxwayisa abantu abaseduze. I-siren izozwakala ngokuqhubekayo kumaminithi we-30 ngaphandle kokuthi iphini libuyiselwe kudivayisi.
UKUQALA NGOKUBA: Ukubukeka kokhiye ophansi ngeke kubangele ukunaka komhlaseli noma ukungenela, ukunamathiselwa okuphelele esikhwameni sakho, ibhande noma isikhwama sesikole ukuze kube lula, ukufinyelela ngokushesha, Ngokusebenza kwezibani ze-LED, efanelekile imvelo yezimo eziphuthumayo ezinokukhanya okuncane, ngenani elikhulu.
UMSEBENZI WOKUQALA: Umsindo ozwakalayo we-alamu ungabangela ukuqapha, futhi ngokusebenzisa izixwayiso eziqhubekayo, ukuheha abadlula-ngokufuna imithombo yomsindo ukusiza, ama-alamu adijibel we-120dB, angasakaza izinyawo ze-330 (100M).
I-WIDELY APPLICABLE CROWD: Intsha, abafundi bekolishi, ama-owuni ebusuku, izisebenzi ezizimele, abadala, abagijimi, abahlengikazi / abasebenzi bokunakekelwa ngabasebenzi, izinketho zokuzivikela ezisebenzayo / zomzila.
UKUQALA KWAMAKHIWO: Isekelwe yi-3 ama-pc alkaline amabhethri LR44, Ungayisebenzisi njalo uma kungenjalo-ke okuphuthumayo, ngakho umkhiqizo awukwazi ukusebenza uma kwenzeka kuphuthumayo. Hlola njalo umkhiqizo bese ushintsha ibhethri uma kunesidingo. Susa isikrini ukuze uvule i-cover yangemuva ukuze ushintshe ibhethri, ibhethri ingathengwa kalula esitolo ukuze ithathe isikhundla.
* I-alamu yomuntu siqu - i-120dB yevolumu yokulwa nokweba, ukulwa nokudlwengulwa, i-anti / old jogger / ingane / i-anti-attack yokulwa, isenziwa ngokushesha ngokudonsa inaliti.
* Indandatho yokhiye obushelelezi - lesi sikhiye esinokhiye ophansi ukunamathela okuphelele esikhwameni sakho, ibhande noma isikhwama, okulula, ukufinyelela ngokushesha, ukuze into encane yemfashini ingabangeli ukunaka komhlaseli noma isihlaseli.
* Izibani ze-LED ezakhelwe ngaphakathi - izibani ze-LED ezakhelwe ngaphakathi, ezinenani elikhulu lemvelo yezimo eziphuthumayo zokukhanya okuphansi.
* Ngenxa yobukhulu be-compact, ukusebenza okuphezulu nokuklanywa kwekhwalithi ephakeme, i-electronics yokuzivikela yokuzivikela ephuthumayo ikunikeza ububanzi obunokusheshayo kwemikhiqizo yakho ye-alamu yomzimba.
Izinzuzo ze-alamu yethu siqu:
Alamu encane siqu kuyindlela ehlakaniphile yokuzivikela engozini engaba khona. Ezinye zezinzuzo zalolu khetho zihlanganisa:
+ Umsebenzisi womklamo onobungane kuwo wonke ubudala.
+ Izibani ze-LED ezakhelwe ngaphakathi zokukhanya okuphansi okukhanyayo.
+ Iphrojekthi emfashini enjalo ngeke ibangele umhlaseli noma umhlaseli.
+ Uma usengozini, ungakhumbuza abanye ngale ndlela, ibonakala kuze kube yizinyawo ze-330 (100M).
Kubuye kube ngumndeni, abangane, isipho esiphelele somthandi.
1 x i-alamu yomuntu omnyama
1 x umsebenzisi womsebenzisi
2.6 x 1.6 x amasentimitha angu-0.9
Ukubuka okuphelele kwe-4237 Ukubuka kwe-1 Namuhla